Dil qareen Philippe Schol iyo afduub been ah Schiphol: Martin Vrijland
Waxay noqon doontaa wax aad u fog oo ay u muuqan doonaan kuwo badan oo u dhawaaqi doonaan sida hadal aan caadi ahayn markii aan idhaahdo magaca Philippe Schol wuxuu xiriir hoose la leeyahay Schiphol. Hoos ka daawo magaca Philippe Schol. Subliminal waxaa jira ereyga "Schiphol". Programming Neuro Luuqada ama barnaamij hoosaadku waa sidaa darteed waxbaa ku dhaca maskaxdaada. Kuwani waa qaabab "farsamooyin hypnosis" loo isticmaalay warbaahinta sanado. Dabcan waa wax laga argagaxo in qareen kale la toogto, laakiin dilkii Derk Wiersum wuxuu aad ula mid ahaa PsyOp (qalliin nafsaani) oo halkan sidoo kale garan mayno in taasi aysan mar labaad kiiskaasi noqon. Bayaanka in Philippe Schol uu qatar ku yahay cisbitaalka ma ka saarayo suurtagalnimada PsyOp. Xaaladaha oo dhan waa suurtagal in lala shaqeeyo dadka loo-adeegayo ee 'PsyOp' iyo / ama lala shaqeeyo qoto dheer. Ogeysiinta afduubka Schiphol ayaa hadda muuqata inay digniin been ah noqoto.
Aad ayey muhiim u tahay in la fahmo sida PsyOps loogu wada dari karo qoto dheer iyo / ama dadka isu tanaasul, laakiin taa waxaa kasii daran sida maalmahan xitaa aan bil xitaa laga sugin in lagu soo rogo tallaabooyin ama sharciyo cusub. Abuurista dhibaato saameyn weyn oo bulshada dhexdeeda ah, iyadoo ujeedku yahay boolis dheeraad ah (lacag badan booliiska, cadaalada iyo / ama ciidanka iyo sharciga booliiska oo badan), waa sida ciyaarta Howlgallada cilmi nafsiga ay u shaqeeyaan. Sida aad farsamo ahaan u xallin karto nooca 'PsyOp', filimka Wag Dog ee ka soo jeeda 1997 ayaa horay loogu soo jeediyay nooc khafiif ah, laakiin kama saari karno inay tahay waxqabadka maalinlaha ah ee warbaahinta iyo habka maanta ay uga horumarsan yihiin sidii hore. . Tan waxaan ku sharaxay qodobo dhowr ah:
Waxaa lagugula talinayaa inaad si fiican u aqriso qodobbadaas. Sidoo kale aniga buugga cusub Mar labaad ayaan ka wada hadlayaa mawduucaan waxaanan ka wada hadlayaa sawirka guud ee sida duuggu u ciyaaray. Marka laga hadlayo dilkii suurta galka ahaa ee '' PsyOp '' dilkii Derk Wiersum, muddo yar ka hor wasiir Ferdinant Grapperhaus wuxuu si adag ula qabsaday dheriga canshuurta si uu lacag badan ugu keydsado booliiska. Qaddarka yar ee 110 million wax kayar! Haa, waxaad u maleyneysaa inay taasi wax hagaagsan tahay, maxaa yeelay si weyn ayaa loogu baahan yahay dambiyadaas oo dhan:
Ka dib oo dhan, waxaan leenahay (PsyOp?) Weerarkii lagu soo qaaday Dhismaha Panorama, weerarka (PsyOp?) ee weerarka Dhismaha Telegraaf oo waxaan ku dareynay dareere (PsyOp?) Habka Marengo malaha dambiile (is-abuuray?) Mocro Mafia headpiece (qoto dheer?) Ridouan Taghi. Annagu garan mayno. Dhammaantood waa sheeko warbaahin. Waxaa noo keenay warbaahinta sidaas darteedna waan aaminsanahay. Haddiise warbaahinta kale aamusto, waa inay run noqotaa. "Haa, waxaad haysataa Martin Vrijland oo aan rumeysneyn waxa aan ku aragno warbaahinta, laakiin hey taasi waa mid aan safan!Mise taasi waa mid la jaan qaadaya tan oo runtii naloogu ciyaarayaa heerka soo-saarka istuudiyaha John de Mol? Haa, John de Mol waa milkiilaha Algemeen Nederlands Persb Bureau haweenka iyo marwooyin.
Macnaha guud ee hababka subliminal ee warbaahinta, waxay sidoo kale faa'iido badan u leedahay in la tilmaamo qaababka NLP ee horay loo soo sheegay. Waa si sax ah qaabkan khiyaanada badan, ee aan loo meel dayin ee barnaamijyada ka shaqeeya si aad uga awood badan kan loogu dhawaaqo barnaamijyada iyada oo loo marayo maareynta aragtida, taas oo lagu dabaqo dadka maalin kasta. Barnaamijyada khiyaamada leh ee noocan ah waxaa lagu sameeyaa farsamooyin ay garanayaan uun koox dad ah oo soo bartay cilmi-nafsi, cilmi-nafsi ama suuq geyn. Waxaan had iyo jeer ka hadleynaa cinwaanka maqaal, sawirro ama sawirro guuritaan ama dhismaha qoddo sheeko oo barnaamijkan hoosaadka leh uu ka dhacayo. Wareegyada wareegga ah iyo wariyaha gadaashiisa iyo gadaal ee wararka NOS ayaa tusaale u ah qaabab khiyaano ah oo farsamooyinka hypnosis. In kasta oo aan u maleyneyno in kaliya kuwa khayaaliga ah sida Victor Mids ay wax noocan oo kale ah dhigaan, ma lihin taxadarka maalinlaha ah ee hababka noocan ah ee wararka. Xitaa haddii aan aqrinay in farsamooyinka noocan ah la istcimaalo, waxaan sii wadaynaa aqrinta wargeysyada ama daawashada wararka, maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaan ka gudbi karno ama aan rabno inaan 'iska ilaalino waxa dhacaya'.
Fiidiyowga hoose wuxuu muujinayaa sida farsamooyinka hoosaadka loo yaqaan 'subliminal' ay saameyn weyn ugu leeyihiin miyirkaaga hoose inta aad u maleynayso inay suurtagal tahay. Warbixinta afduubka ee Schiphol waxay u ekaan kartaa qaylo madhan, laakiin waxay u dhowdahay inay la xiriirto nooc ka mid ah barnaamijyada 'subliminal programming' si looga xiro sheekada kale ee maanta maskaxdaada ku jirta: Philippe Schol. Waa in had iyo jeer laguu keenaa oo laguugu hayaa qaab aqbalaad ah, si aad u aqbasho dhammaan shuruucdaas cusub: lacag badan oo loo siiyo dawladda booliiska iyo sharciga booliiska oo dheeraad ah.
Ka digtoonow suurtogalnimada in si weyn laguugu ciyaari doono wada hadalada u dhexeeya dawladda iyo warbaahinta iyo warbaahinta kale!
Fiidiyowga, xulo 'cinwaan hoosaadyo' ka dibna dooro 'turjumaad toos ah' ka dibna 'Nederlandays' oo ku saabsan qoraallada 'Dutch'
Soodhawrka xiriiriya: wikipedia.org, destentor.nl, rtlnieuws.nl
Tags: doodda, qoto dheer, qoto dheer, Derk, Derk Wiersum, featured, toogasho, afduubka, warbixin afduubka, warbaahinta, ogeysiin, neer, hawlgalka, Philippe Schol, nafsi ahaaneed, Psyop, Schiphol, Wiersum
7 November 2019 ee 00: 25
Mar labaad waa mid xiise leh oo loogu yeerayo Idd, qaylo-dhaan af-duubis ah oo weriyuhu sii daayay hoolka socdaalka |
"Ma ii sheegi kartaa waxa khaldan, ma'am?"
CUT & Paste iyo maalinta ku xigta Pauwtje waxay leedahay mowduuc kale (oo muddo dheer ku yaal shelf).
Maxaa ku dhiirigelinaya dadka iyagu isku amaahiyey howlaha noocaas ah, si looga dhigo kuwa sida xun u fududeeya hurdada wanaagsan ee habeenka ah waxaad u baahan tahay ciidan cilmi nafsi ah, waxay si isa soo taraysa u cadaysaa
7 November 2019 ee 00: 36
Hagaag muxuu qabtay?
7 November 2019 ee 01: 20
Wixii ka soo baxa MSM sida shilku wuxuu uun u noqon karaa layli loogu talagalay ilaaliyeyaasha halyeeyada ah. Eeg haddii nidaamyada oo dhami ay shaqeeyaan oo ay tijaabiyaan sida idaha arragsan u falcelinayaan ... intaas oo dhan, cabiridda ayaa og
7 November 2019 ee 10: 33
Run, in kasta oo ay leeyihiin awood iyo lacag, haddana had iyo goor waxay cabsi iyo kalsooni darro ku qabaan dadka caadiga ah. Weligaa ma ogaan kartid. Iyagu waa kuwa ku turunturoodaya awood iyo lacag iyadoon lahayn aqoonsi dhab ah oo dhab ah iyo daacadnimo. Taasi maaha iib.
7 November 2019 ee 10: 38
Ha iloobin in ay jirto cabsi iyo kalsooni darro sababta oo ah ma garan karaan mana doonayaan in ay la gartaan dadka caadiga ah sababta oo ah waa soogalooti, ​​waa soogalootiga soogalootiga ah ee haya furayaasha. Ka baqaa inuu lumiyo furayaashaas lama filaanka ah mudnaanta laxiriirta, lacagta iwm.
8 November 2019 ee 19: 25
Haa, taasi waa sax, Mudanayaal iyo marwooyin qoraalka ah ayaa ka go'an inay ku dhagaan ugu yaraan ama ugu yaraan tallaabooyinka ay dejiyeen. Cod kasta oo leexleexad leh waxaa si dhaw ula socda tuhmanayaasha caadiga ah. Waligeed sidan kama duwanaan Madurodam, oo ah jardiinooyinka iyo deyrarka lagu hayey, qikadaha ayaa culeyskiisu yahay .. waxay u egtahay mid dhab ah, oo aan cago badan ku taagnayn ..
« Adobe, Twitter iyo warbaahinta guud miyaan la dagaallami doonaan qoto dheer?
Waa maxay dhibaatada loo yaqaan 'nitrogen', muxuu beeraleydu uga cabanaayaa maxaase xawaaraha u yaraanaya? »
Guud ahaan Wadarta: 14.058.822